हेर्नुहोस आज बि.स. २०७६ मंसिर १९ गते बिहिबार डिसेम्बर ५ तारीखको रा’शिफल « Swadesh Nepal
हेर्नुहोस आज बि.स. २०७६ मंसिर १९ गते बिहिबार डिसेम्बर ५ तारीखको रा’शिफल
आज श्री शाके १९४१ बि.स.२०७६ साल मंसिर १९ गते बिहीबार इश्वी सन २०१९ डिसेम्बर ५ तारीख मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष नवमी तिथी पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र वज्र योग वालव करण चन्द्रमा कुम्भ राशिमा १३ः४० बजे सम्म पश्चात मिन राशिमा आनन्दादि योगमा मुद्गर योग परिधावीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पाँगामा वैष्णवीदेवी यात्रा, स्वयंसेवक दिवस धनगढीमा दुर्गा जाँत, डोटीमा पोखरी जाँत – ज्यो.प. सरोज घिमिरे।
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मध्यान पश्चात दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भाबना रहन सक्छ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढाँ भएको महसुस हुनेछ । सामान्य आर्थिक अभाब रहनेछ ।
बृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थी वर्गका निम्ती समय त्यति उत्तम रहेको छैन । मध्यान पश्चात मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँकार्यको थालनिका बिशेष योग रहनेछ । आम्दानीका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन ।
मीथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – गैर ब्यक्तिको संगतले अपजसको सामना गर्नु पर्ला । यात्रा कारक समय रहेको छ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेको छ । मध्यान पश्चात भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा मन प्रशन्न रहनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला ।
कर्कट राशि – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो – ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा दबावको सामना गर्नु पर्नेछ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । तात्कालिक यात्राको योग रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । अध्यन अध्यापन मध्यम रहला ।
सिंह राशि – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे – भोग बिलास को क्षेत्रमा समय ब्यतित हुनेछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । मध्यान पश्चात खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति बाट बच्नु पर्ने समय छ । सामान्य आर्थिक अभाबको समेत सामना गर्नु पर्नेछ ।
कन्या राशि – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो – सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । यात्रामा सामान्य कठिनाई आईपर्न सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन । मध्यान पश्चात जिवनसाथीको सहयोगद्वारा अप्रत्यासित लाभको अवसर मिल्नेछ । ब्यपार ब्याबसायमा समय उत्तम रहनेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण कार्यक्षेत्र प्रभाबित रहनेछ ।
तुला राशि – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते – सामान्य चुनौति पश्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ । अरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । मध्यान पश्चात जिद्दी स्वभावको कारण प्रतिश्पर्धामा पराजयको सामना गर्नुपर्नेछ । अनावश्यक क्षेत्रमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ ।
बृश्चिक राशि – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु – सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनेछ । समयमा सहि निर्णय गर्ने क्षमता बढ्ने छ । मध्यान पश्चात बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ ।
धनु राशि – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे – मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । साझेदारी कार्यका क्षेत्रमा आम्दानि उत्तम रहनेछ । मध्यान पश्चात आम्दानिको क्षेत्र सबल रहेता पनि कार्यको क्षेत्रमा भने त्यति मन लाग्ने छैन । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला ।
मकर राशि – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि – सञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको दबाबको कारण मानशिक समस्या आई पर्ने छन । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ । मध्यान पश्चात नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त होला । धार्मिक क्षेत्रको यात्राको सम्भाबना रहेकोछ ।
कुम्भ राशि – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द – नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । भोज भतेर जन्यकार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ ।
मिन राशि – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मध्यान पश्चात मान प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेयोग परेकोछ । दाम्पत्य शुखमा कमि आउनेछ । मान्यजन को साथ प्राप्त हुनेछ । नयाँकार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको योग रहेकोछ ।